Wasiiru dowlaha arrimaha Dibadda Soomaaliya oo la kulmay Jaaliyadda Ohio – Hornafrik Media Network
Wasiiru dowlaha arrimaha Dibadda Soomaaliya oo la kulmay Jaaliyadda Ohio
DHACDOOYINKAMADASHA HORNAFRIKWARARKA MAANTA
By Liibaan Nuur	 On Feb 18, 2019
Columbus Ohio (Hornafrik):- Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheikh Ahmed oo soo gaaray magaalada Columbus Ohio ayaa kulan soo dhoweyn ah la qaatay Jaaliyadda gobolka, waxaana mudadii kulanka uu socday ka warbixiyay xaaladda dalka guud ahaan iyo marxaladihii ay dowladdu soo martay mudada labada sano ahayd ee ay jirto
Wasiirka ayaa xusay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay horey u socoto, isla markaana shaqo ay dadku qabtaan ay ku socon karto, taas oo qof walba looga bahanyahay qeyb in uu ka qaato si ayuu yiri caalamka loola jaan qaado.
Mohamed saalix oo ka mid ah dadka soo abaabulay kulanka ayaa xusay in ay dowlada ku taageerayaan tilaabooyinka ay qaadneyso, isaga oo xusay in wax baddan oo ay dowladu qabatay ay taageersan yihiin kuna ammaanayaan.
Ka soo qeyb galayaasha kulankan soo dhaweynta ayaa wasiirka su’aalo badan ka weydiiyay xaaladda dalka, sida, Arrimaha Amaanka, Ciidamada, Siyaasada dibada,Arimaha Heshiisyada caalamigaa, xariirka Soomaaliya iyo Kenya.
Wasiirka oo wax laga weydiiyay hadalkii dhawaan ka soo baxay dowlada Kenya ee ay Soomaaliya xariirka ugu jartay ayaa muujiyay in Dowlada Soomaaliya aysan wax qalad ah ku lahayn talaabadaasi sidii ku haboonaydna ay uga jawaab celisay, iyada oo aysan dhici doonin ayuu yiri in gorgortan laga galo Kheyraadka iyo xaduudaha Soomaaliya.
Warbixin dheer kadib waxa uu qurba joogta ku dhiirogaliyay in ay dalka ku soo laabtaan, isla markaana wax baddan ka ogaadaan xaalada dalka.
Koobka Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Konforta Suudaan oo lagu soo gabagabeyay Caasimadda Jubba
Guddoomiyaha Maxkamada sare ee dalka oo shir uga qeyb galaya dalka Masar